Qaaradda Africa oo markii ugu horeysey yeelatay hal baasaboor. – Radio Daljir
Qaaradda Africa oo markii ugu horeysey yeelatay hal baasaboor.
Luulyo 17, 2016 11:34 g 0
Kigali, July, 18 2016–Magaalada Kigali ee dalka Rwanda ayaa waxaa kasocda shir madaxeedka 27aad ee midowga Africa kaasoo looga hadlayo xaaladda wadanka Koonfurta Suudaan, miisaaniyadda qaaradda iyo doorashada golaha Midawga Afrika.
Madaxda Afrika ayaa isku raacay baasaboor cusub oo qaaradda oo dhan ka dhexeeya, kaasoo la siin doono dadka oo dhan kaddib marka uu si rasmi ah u dhaqan galo.
Baasaboorkan oo ah mid ay maamuleyso hay’adda Midawga Afrika ayaa lagu bilaabay madaxweynaha dalka Chat oo sidoo kale ah madaxa Midawga Afrika, Idris Debi iyo madaxweynaha dalka martigelinaya shirka ee Rwanda, Paul Kagame.
Maanta oo Isniin ah ayaa waxaa lafilayaa in madaxda qaaraddu ay doortaan gudiyada gaarka ah ee maamuli doona ururka ay ku midaysan yihiin dalalka Africa ee AU.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin oo wareegyadii ugu dambeeyey galay.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Garoowe.